Ny taxi amin'ny ho avy dia ao anatin'ny ankehitriny (II): Lyft | Vaovao IPhone
Ny taxi amin'ny ho avy dia ao anatin'ny ankehitriny (II): Lyft
Misy ny milaza fa raha tsy maharesy ny fahavalo ianao dia tsy maintsy miaraka aminy. Lyft dia nanana fotoana maro hanatevin-daharana an'i Uber ary nametraka ny adin'i ny titans roa an'ny taxi 2.0, saingy niafara tamin'ny fandavana izany mety foana izany ary hatrany amin'ny dome dia nanohy nanao filokana tamin'ny fampielezana varotra mahery setra izy, fanapahana hacking na aiza na aiza ary serivisy tena tsara.
1 Mifaninana amin'ny vidiny rehetra
2 Tsy misy fahasarotana
Mifaninana amin'ny vidiny rehetra
Raha misy zavatra mampiavaka an'i Lyft dia ilay fifaninanana masiaka nataony tamin'i Uber. Izany dia niteraka fatiantoka an-tapitrisany dolara tamin'ny vidin'ny fampiroboroboana tsara ary famporisihana maro ho an'ny mpamily, zavatra izay toa tsy dia nisy dikany firy tamin'ny mpampiasa vola noho ny fahitan'ny orinasa volomparasy mitombo ny isan'ny mpampiasa isam-bolana ary nanamafy ny tenany ho safidy faharoa any Etazonia.
Ary izany no iray amin'ireo zavatra voalohany tsy maintsy raisintsika miaraka amin'i Lyft: mandritra izao fotoana izao Any amin'ny firenena amerikana avaratra no misy azy. Ny drafitra fanitarana an'ity fampiharana ity dia tsy dia naniry fatratra tahaka ny an'ny Uber, ary na dia teo aza ny zava-misy fa ny CEO dia efa niresaka imbetsaka momba ny fanitarana Eoropeana, ny zava-misy dia amin'ny fotoana fohy dia toa tsy ho hitantsika izany.
Ny fampiharana Lyft tena tsotra izanyRaha ny marina dia mety manana ny interface tsotra indrindra amin'ny zavatra rehetra ho hitantsika amin'ity miniseries of reviews ity izy. Miaraka amin'ny feo mavokely efa fantatra ho manjaka amin'ny interface tsara, dia mahazo sari-tany sy boaty vitsivitsy hamenoana ny fiaviantsika sy ny tanjonay izahay, ary koa ny mety hisafidianana ireo safidy mahazatra amin'ny dia: Line (fizarana fiara sy fitehirizana ), Lyft (ny fenitra), Plus (misy seza 6) ary Premier (fiara mihaja misy seza hoditra). Ny Line dia mahaliana indrindra satria ny vidiny dia raikitra ary na dia tsy mizara fiara aza isika dia handoa kely kokoa noho ny amin'ny Lyft mahazatra.
Izany rehetra izany dia namboarina tamin'ny fotoana fakana sary tena marina tany amin'ireo tanàn-dehibe amerikana izay nahafahako nisedra azy, ary koa ny traikefan'ny mpampiasa tena tsara. Mba hamita ilay asa ary araka ny efa nolazainay, Lyft dia manome varotra mahery setra, zavatra izay afaka mandray soa avy amin'ny mpampiasa.
Toy ny amin'ny sisa amin'ireo fampiharana dia azonao atao ny mandray soa avy amin'izany mahazo mitaingina maimaim-poana amin'ny fisoratana anarana amin'ny alàlan'ity rohy ity (miovaova arakaraka ny daty ny vola, na dia 25 na 50 dolara aza matetika no mifandimby), na azonao atao izany a fisoratana anarana tsy misy trosa fampiroboroboana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ny taxi amin'ny ho avy dia ao anatin'ny ankehitriny (II): Lyft
Tonga ny Android Wear 2.0 miaraka amin'ny LG Watch Style sy Watch Sport izay noforonin'i Google
Flipboard dia havaozina anatiny sy ivelany amin'ny kinova 4.0